Vaovao - Ny tsy fitovizan'ny lamba samihafa, nahoana ny lamba antistatika no mifidy polyester?
Antsoina hoe landihazo. Ny fibre dia ampiasaina amin'ny lamba sy ny lamba firakotra. Ny tavy landihazo dia manana tanjaka avo, tsy azo idirana ny rivotra, tsy mahazaka ketrona ary manana fananana mahantra; manana fanoherana hafanana tsara izy, faharoa amin'ny hemp ihany; tsy mahazaka asidra ratsy izy io, ary mahatohitra ny alikaola amin'ny hafanan'ny trano; manana firaiketam-po tsara amin'ny loko, mora mandoko, chromatogram feno ary loko mamirapiratra. Ny lamba vita amin'ny landihazo dia manondro ny lamba vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy na kofehy ary kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy.
Mampiavaka ny lamba landihazo:
1. Manana hygroscopicity matanjaka sy fihenan-tsasatra lehibe, manodidina ny 4-10%.
2. fanoherana Alkali sy asidra. Ny lamba landihazo dia tena miovaova amin'ny asidra tsy mandia, na asidra solifara solika be aza dia hanimba azy, fa ny asidra biolojika kosa malemy, saika tsy misy vokany manimba. Ny lamba landihazo dia mahatohitra alkali kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny alkali dilute dia tsy misy fiantraikany amin'ny lamba landihazo amin'ny hafanan'ny efitrano, fa ny tanjaky ny lamba landihazo dia hihena aorian'ny vokatry ny alkali mahery. Ny lamba landihazo "mercerized" dia azo alaina amin'ny fikolokoloana lamba landihazo misy soda kaodika 20%.
3. Ny fanoherana maivana sy ny fanoherana ny hafanana dia mahazatra. Amin'ny masoandro sy ny atmosfera, ny lamba landihazo dia haidina oksizenina miadana, izay hampihena ny tanjaka. Ny lamba landihazo dia ho simba amin'ny hetsika hafanana maharitra maharitra, saingy mahazaka fitsaboana hafanana avo lenta maharitra 125 ~ 150 ℃.
4. Ny microorganism dia misy fiatraikany manimba amin'ny lamba landihazo. Tsy mahatohitra bobongolo izy io.
Ny polyester cotton dia karazana lamba mifangaro amin'ny landihazo sy polyester. Misy landihazo kely kokoa ao anatiny. Ny toetran'ny polyester landihazo dia samy manana ny tombony azo avy amin'ny landihazo sy polyester. Ny fibre landihazo ve dia ho fifangaroan'ny landy sy ny nylon? Ny fibre vita amin'ny landihazo dia karazana fibre polypropylene novaina. Ny vokatry ny fitrohana ny fibra vita amin'ny landihazo dia mahatonga azy io ho malefaka, mafana, maina, hadio ary misy bakteria. Ny atin'akanjo fibre vita amin'ny landihazo, akanjo fandroana, T-shirt ary vokatra hafa novolavolaina sy novokarin'ny modely azo ampiasaina dia manana tombony amin'ny fitehirizana ny hafanana, ny fitrohana ny rano, ny fitondra mando, ny fanamainana haingana, ny bakteria ary ny fananana hafa.
Spandex no fanafohezana ny fibre polyurethane, izay karazana kofehy elastika. Tena matevina izy io ary afaka mihinjitra in-6-7, saingy afaka miverina haingana amin'ny toetrany voalohany izy amin'ny fanjavonan'ny fihenjanana. Ny firafitry ny molekiola dia rojo toy ny polyurethane malefaka sy azo zahana, izay manatsara ny toetrany amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny fizarana rojo mafy.
Spandex dia manana elastika tsara. Avo 2-3 heny ny hery noho ny an'ny fibre latex, ny haavon'ny tsipika dia matevina ihany koa, ary mahatohitra ny fahasimban'ny simika. Spandex dia misy fanoherana asidra sy alkaly tsara, fanoherana ny hatsembohana, fanoherana ny ranomasina, fanoherana fanadiovana maina ary fanoherana fanoherana. Amin'ny ankapobeny ny Spandex dia tsy ampiasaina irery, fa ny ampahany kely aminy dia afangaro amin'ny lamba. Ity karazan-tavy ity dia samy manana ny fehin'ny rubber sy ny fibre, izay ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny kofehy mihodina miaraka amin'ny spandex ho fotony. Izy io koa dia manana landy miboridana spandex ary landy manolana vita amin'ny spandex sy kofehy hafa. Ampiasaina matetika amin'ny karazan-damba vita amin'ny baoritra, lamba vita amin'ny kofehy vita amin'ny lambam-baravarana, lamba vita amin'ny lamba ary lamba elastika.
Terylene dia karazana fibres synthetic, izay anarana ara-barotra polyesterylene terephthalate polyester fibre ihany koa, izay ampiasaina amin'ny lamba. Dacron, fantatra amin'ny anarana hoe "Dacron" any Sina, dia be mpampiasa amin'ny fanamboarana lamba lamba sy vokatra indostrialy. Polyester dia manana formability tsara. Ny kofehy na lamba vita amin'ny polyester fisaka, malefaka na malemy naorina aorian'ny fametrahana azy dia mety haharitra mandritra ny fotoana lava aorian'ny fanasana azy im-betsaka amin'ny fampiasana azy. Polyester dia iray amin'ireo kofehy synthetic telo miaraka amin'ny haitao tsotra indrindra sy ny vidiny mora kokoa. Ho fanampin'izany, manana mateza mafy sy maharitra izy io, elastika tsara, tsy mora simba, mahazaka harafesina, insulate, crisp, mora sasana sy maina, sns, izay tian'ny olona.
Ho an'ny indostrian'ny sakafo amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny microelectronics, ny indostrian'ny arintany, ny indostrian'ny fanontam-pirinty sy ny sisa, ny akanjo anti-static dia be mpampiasa amin'izy ireo ary mitana andraikitra mavitrika amin'ny fanoherana ny static.
Araka ny fantatsika rehetra, ho fototry ny akanjo anti-static: lamba madio anti-static, ny fifantenana azy dia misy fiantraikany amin'ny anti-static effects an'ny akanjo anti-static. Amin'ny maha-iray amin'ireo lamba fanoherana mahery vaika ny static, ny polyester dia vita amin'ny filament polyester ary avy eo ny fibre conductive dia voaravaka lava sy latitude, izay vita amin'ny teknolojia fanodinana manokana. Ny antony nanoloran'i Xiaobian anao hisafidy lamba polyester anti-static dia satria tsy hoe manana fiasan'ny static tsara fotsiny izy io, fa misoroka mazava tsara koa ny fibre lamba na ny vovoka tsara tsy hianjera avy eo amin'ny elanelan'ny lamba, ary manana ny toetran'ny avo fanoherana ny maripana sy fanoherana fanasana; Ampiasaina be ao amin'ny efitrano fidiovana kilasy faha-10 ka hatramin'ny kilasy 100. Ampiasaina be amin'ny microelectronics, optoelektronika, zavamaneno tsara sy indostria hafa izay voakasiky ny herinaratra mijanona ary mitaky fahadiovana lehibe.
Satria lava be ny fibre polyester, noho izany dia tsy mora ny mamokatra poti-volon'ondry, ary lehibe ny hakitroky ny lamba, misy vokany tsara vovoka. Ny vokatry ny famoahana electrostatic an'ny lamba dia ny atin'ny lamba mitafy tariby mitondra (tariby fibre karbonika) mitovy halavirana, manomboka amin'ny 0,5cm ka hatramin'ny 0,25cm.